A ibo ụzọ Kwụsị (kwa ọnụ ụzọ nkwụsị, ọnụ ụzọ na-akwụsị ma ọ bụ ụzọ wedge) bụ ihe ma ọ bụ ngwaọrụ eji ejide ọnụ ụzọ meghere ma ọ bụ mechie, ma ọ bụ igbochi ọnụ ụzọ emeghe nke ukwuu. Otu okwu a ka eji n’obere warara nke etinyere n’ime ime-uzọ ka mgbochi ghara imeghe uzo mgbe emechiri ya. Ogwe ọnụ ụzọ (etinyere) nwekwara ike ịbụ obere bracket ma ọ bụ mpempe akwụkwọ 90-degree nke etinyere na etiti nke ọnụ ụzọ iji gbochie ọnụ ụzọ ahụ ịgbagọ (bi-directional) ma gbanwee ọnụ ụzọ ahụ n'otu ụzọ (ntụgharị na-agbanye ma ọ bụ si-n'udo sere).Ijide ọnụ ụzọ
Enwere ike ịkwụsị ọnụ ụzọ site n'ọnụ ụzọ nke bụ nanị ihe siri ike siri ike, dịka roba, tinye ya n'ụzọ nke ọnụ ụzọ. Ndị a na-akwụsịkarị na-emezighị emezi.
 N’akụkọ ihe mere eme, brik bd ụzọ abụwo nhọrọ ndị a ma ama ma ọ dị.
[2 Agbanyeghị, dịka ekpughere ọdịdị ndu nsi nke ndu, ejirila nkụda mmụọ mee ihe.
 Anotherzọ ọzọ bụ iji a ọnụ ụzọ na-akwụsịnke bụ obere osisi osisi, roba, akwa, plastik, owu ma ọ bụ ihe ọzọ. Emepụtara wedges nke ihe ndị a na-ahụkarị. A na-agbanye wedge ahụ n'ọnọdụ ya na ike nke ọnụ ụzọ, na-agbago elu ugbu a na nkwụsị ụzọ, na-enye esemokwu esemokwu zuru oke iji mee ka ọ ghara imegharị.
 Usoro nke atọ bụ ịkwadebe ọnụ ụzọ ahụ n'onwe ya na usoro nkwụsị. N'okwu a, a na-etinye ogwe igwe dị mkpirikpi ejiri roba, ma ọ bụ ihe ọzọ nwere esemokwu dị elu na mgbatị dị n'akụkụ ala nke ọnụ ụzọ na-eche ọnụ ụzọ na n'akụkụ ọnụ ụzọ nke dị na ụzọ ọ na-emechi. Mgbe a ga-emeghe ọnụ ụzọ ahụ, a na-agbada ihe ntụchi ahụ ka ngwụsị roba ahụ metụta ala. Na nhazi a, mmegharị ọzọ nke ọnụ ụzọ na-emechi emechi na-eme ka ike dị na njedebe roba, si otú ahụ na-abawanye ikike esemokwu nke na-emegide mmegharị ahụ. Mgbe a na-emechi ọnụ ụzọ ahụ, a na-ahapụ nkwụsị ahụ site na ịpị ụzọ ahụ ka ntakịrị mepee, nke na-ewepụta nkwụsị na-enye ya ohere ịtụli elu. Newdị ọhụrụ nke ịkwadebe ọnụ ụzọ na usoro nkwụsị bụ itinye magnet na ala nke ọnụ ụzọ n'akụkụ nke na-emepe n'èzí nke na-agbanyezi magnet ọzọ ma ọ bụ ihe magnetik na mgbidi ma ọ bụ obere ụlọ na ala. Ihe ndọta ahụ ga-enwerịrị ike nke na ọ ga-eburu ibu nke ọnụ ụzọ ahụ, mana ọ ga-esighi ike ikewapụ ya na mgbidi ma ọ bụ ehiwe
Na-egbochi mmebi site n'ọnụ ụzọ
A na-eji ụdị ọnụ ụzọ ọzọ eme ihe iji gbochie ibo ụzọ imeghe oke oke na imebi mgbidi ndị dị nso. N'okwu a, a na-atụba sịlịnda ma ọ bụ dome - ma ọ bụ mkpanaka ma ọ bụ ngọngọ nke metal-tapped metal, osisi ma ọ bụ plastik n'ime mgbidi ahụ, na-akpụzi ma ọ bụ ala n'okporo ụzọ. Ọ bụrụ na etinyere ya na mgbidi ahụ, ọ nwere ike ịdị ma ọ bụ sentimita ole na ole n'elu ala, ma ọ bụ n'ogo dị elu iji zute ọnụ ụzọ ụzọ. A na-akpọ ibo ụzọ dị mkpụmkpụ, nke a rachiri ná mgbidi, mgbe mgbe a na-akpọ mgbidi dome ma ọ bụ cylinder.
N'oge ụfọdụ, a na-eji nkwụsị ndị etinyere n'etiti etiti ọnụ ụzọ, dịka akụkụ nke etiti ọnụ ụzọ. A na-akpọ nkwụsị dị otú ahụ dị ka "ọnụ ụlọ nkwụsị" ma ọ bụ ọnụ ụzọ "mgbachi pin" ma na-ejikarị ya eme ihe iji gbochie mmebi nke ịkpụzi baseboard.